यसकारण विश्वले सम्झिरहनेछ क्रोएसिया र मोडरिकलाई ! - यसकारण विश्वले सम्झिरहनेछ क्रोएसिया र मोडरिकलाई !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, ३२ असार, 07:18:12 PM
काठमाडौँ, १ साउन । रुस विश्वकप मुख्यतया दुई कारण चर्चित रह्यो । पहिलो बलिया भनिएका टिम फाइनल नै पुगेनन । दोश्रो कसैले नसोचेको टिम क्रोएसियाले फाइनल खेलेर सबैको मन जित्न सफल भयो ।
रुस विश्वकपलाई सम्झिने अर्को कारण हो, दुई उत्कृष्ट खेलाडीको उद्य र चर्चा । फ्रान्सलाई विश्वकप जिताउन मुख्य भूमिका खेलेका किलिएन एमबाप्पेले पेलेको रेकर्डसँग बराबरी गरे ।
फाइनलमा गोल गरेर १९ बर्षमै रुस विश्वकप २०१८ को सर्वोत्कृष्ट युवा पुरस्कार उनलै जिते । तर उनको यो अवार्डलाई पनि फिक्का पार्नेगरी क्रोएसियाका कप्तान लुका मोडिकलले उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड जिते ।
उनको उत्कृष्ट प्रदर्शनले क्रोएसिया इतिहासमै पहिलोपटक फाइनल पुगेको थियो । उनले फाइनल जित्न नसकेपनि राम्रो खेल खेलेर सबैको मन मात्रै जितेनन । आफ्ने देशको राष्टपतिबाट आमाको जस्तै माया पाए ।
क्रोएसियाकी राष्टपति कोलिन्दा ग्राभरले गोल्डेन बल जितेका मोडिकलाई अंगालो हालेर उनको आँखाबाट खसिरहेको आँशु पुछिदिएको तस्बिर फेसबुकमा भाइरल बनेको छ । फाइनलमा हारभन्दा पनि खेल कौशल र उत्कृष्ट व्यवहारले यतिबेला विश्वविजेता फ्रान्सभन्दा बढी क्रोएसियाकै चर्चा छ ।
निकै शान्त रहेर शानदार फुटबल खेल्ने लुकाको जादुले विश्वका धेरैजसोको मन जित्नुले पनि उनलाई विश्वकै फुटबल फ्यानले पछिसम्म सम्झिरहनेछन ।
हुन त सन् २०१४ मा विश्वकप फाइनलमा उपाधि जित्न नसकेका मेस्सीलाई पनि गोल्डेन बल दिइएको थियो । तर उनी आफैमा विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडी हुन । तर रियल मडिडका प्लेमेकर लुकाको यो गोल्डेन बल उपाधि अरु भन्दा निकै फरक र शानदार छ ।
अर्कोतर्फ उनले फाइनल खेलेका विपक्षी टिमका एम्बाप्पे पनि उत्कृष्ट रहे । एमबाप्पेलाई समेत क्रोएसियाकी राष्टपतिले निकै राम्रोसँग अंगालो हालेर बधाई दिइन ।
खासगरी क्रोएसियाकी राष्टपति तथा एमबाप्पे र लुका मोडिकको उपलब्धीले विश्वका धेरै फ्यानले रुस विश्वकपलाई पछिसम्म पनि सम्झिरहनेछन ।
रुस विश्वकपमा इंग्ल्याण्डका ह्यारी केनले गोल्डेन बुट, बेल्जियमका कोर्टियसले गोल्डेन ग्लोब्स र स्पेनले फेयर प्लेको पुरस्कार पाएका थिए ।
२०७५, ३२ असार, 07:18:12 PM